Tenisy ambony latabatra : nomen’ny seksiona 260.000 Ar ireo mpandresy | NewsMada
Tenisy ambony latabatra : nomen’ny seksiona 260.000 Ar ireo mpandresy
Nanokatra ny taom-pilalaovany ny seksiona Antananarivo Renivohitra, taranja tenisy ambony latabatra. Tsara ny fikarakarana, afa-po ny mpifaninana. Mendrika ny loka natolotra ireo mpandresy.
Natao, ny asabotsy sy alahady lasa teo teny amin’ny kianja mitafon’Ankatso, ny «1er Open d’Antananarivo», tenisy ambony latabatra. Fihaonana, nanombohan’ny seksiona Antananarivo Renivohitra ny taom-piasany.
Enina ny sokajy nifaninanana : ny «toute categorie» lahy sy vavy, ny «2 è série» sy «non licencé» lehilahy ary ny «U16» lahy sy vavy.
Nisongadina teo amin’ny sokajy rehetra ny ekipan’ny Jovenna, nisy an’i Zo Nandrianina (Lino), ho an’ny lehilahy, izay nandresy an’i Mamson avy amin’ny ASA Antsahamanitra ary i Rondro, teo amin’ny andriambavilanitra, nanilika an’i Fanantenana, mpilalaon’ny ASA ihany koa . Samy notoloran’ny seksiona lelavola 260.000 Ar avokoa ireo mpandresy raha 80.000 Ar ny an’ireo faharoa. Toy izany koa ny teo amin’ny «2 è série», izay norombahin’i Njara avy amin’ny Ostie ary i Herman, ho an’ny «non licencé».
Fanomezana maro loko kosa ny an’ireo mpandresy teo amin’ny ankizy latsaky ny 16 taona, toy ny «polo» sy «maillot» niampy medaly sy amboara tsara tarehy avy amin’ireo mpanohana mipetraka any Frantsa sy eto Madagasikara.
Matihanina ny fikarakarana
Fahombiazana ny hetsika voalohany, nataon’ny seksiona Antananarivo Renivohitra. Nahatsiaro ho afa-po avokoa ny mpandray anjara rehetra. Matihanina rahateo ny fikarakarana, na teo amin’ny fandrindrana ny fotoana nilalaovana na teo amin’ireo loka natolotra, izay nambaran’ny besinimaro fa tena lafatra ary manome fampirisihana be dia be ho azy ireo.
Mendri-piderana ny zava-bitan’ny seksiona Antananarivo Renivohitra, tarihin-dRajosoa Edouard (Doudou), sy ny ekipany. Tsy nahagaga raha toa ka nahatratra 170 mianadahy mianaka, avy amin’ny klioba 11, ireo nandray anjara.
Tsy mijanona eo ny fifaninanana fa hatao ny volana aogositra ny andiany faharoa ary any amin’ny volana novambra ny andiany fahatelo. Halefan’ny seksiona hiofana any amin’ny klioban’ny Tuteaux, Frantsa, izay mendrika amin’ny sokajy U16 lahy sy vavy. Tsiahivina fa mpiara-miasa amin’ny seksiona Antananarivo Renivohitra ny Club Tuteaux sy Friendship any Frantsa miampy ny Cap Madagascar ary ny kaominina Antananarivo Renivohitra, izay hanome toerana hananganana ivontoeram-piofanana, ho an’ireo mpilalao eto Antananarivo.